शुक्लागण्डकी मेयर कपमा आयोजक टिम फाइनलमा – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun शुक्लागण्डकी मेयर कपमा आयोजक टिम फाइनलमा – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
शुक्लागण्डकी मेयर कपमा आयोजक टिम फाइनलमा
१४ चैत्र २०७७, शनिबार १९:४०
दुलेगौंडाः शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा जारी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका पालिका स्तरिय मेयर कप पुरुष भलिबलमा आयोजक शुक्लागण्डकी ‘ए’ फाइनल प्रवेश गरेको छ । शनिबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा घिरिङ गाउँपालिकालाई हराउँदै शुक्लागण्डकी ‘ए’ ले फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
गाउँफर्कोदय मावीको खेलमैदान ढोरफिर्दीमा घरेलु दर्शकको भरपुर साथ पाएको शुक्लागण्डकी ‘ए’ पाहिलो र दोस्रो सेट आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । पहिलो सेटमा शुक्लागण्डकीले २५–१४ को फराकिलो अन्तरमा जित निकाल्यो । दोस्रो सेटमा घिरिङका खेलाडीले खेलमा केही सुधार गरेपनि २५–२३ को पराजय व्यहोर्नुप¥यो ।
तेस्रो र चौथो सेटमा घिरिङको जित भयो । घिरिङले २५–२२, २५–१६ को जित हासिल ग¥यो । घरेलु मैदानमा तेस्रो र चौथो सेटमा निकै कमजोर प्रदर्शन गर्दै फराकिले अन्तरले घिरिङ विजयी भएपछि दर्शकदिर्घामा निराशा छाएको थियो ।
िजित्नै पर्ने दबाबमा रहेका शुक्लागण्डकीका खेलाडीले पाँचौ सेटमा भने अग्रता कायम गर्दै दर्शकलाई उत्साहित बनाए । र अन्त्यमा १५–९ को नतिजा निकाल्दै फाईनल यात्रा सुरक्षित गरेका हुन् ।
फाइनलमा शुक्लागण्डकी ‘ए’ बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका र कास्कीको मादी गाउँपालिकाबीच हुने भिडन्तको विजेतासंग आमने सामने हुनेछन् । आईतबार विहान दोस्रो सेमिफाइनल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
शनिबार पहिलो सेमिफाइन सहित ६ खेल भए ।
शनिबारको पहिलो खेल पहिलो चरण अन्तर्गत तनहुँको भिमाद नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाबीच भएको थियो । जसमा भिमाद नगरपालिका २–० को सोझो सेटमा विजयी भएको छ । पहिलो सेटमा २५–१८ ले विजयी भएको भिमाद दोस्रो सेटमा २५–२२ स्कोर प्राप्त गर्दै क्वाटरफाईनल प्रवेश गर्न सफल भएको छ ।
क्वाटरफाईनलको पहिलो खेलमा पुतलीबजार नगरपालिका स्याङजालाई २–१ को सेटमा पराजित गर्दै कास्कीको मादी गाउँपालिकाले सेमिफाईनलको यात्रा तय गरेको हो । मादीले पुतलीबजारलाई २३–२५, २५–१९ र २५–२१ को स्कोरका साथ विजयी हासिल गरेको छ ।
दोस्रोे क्वाटरफाईनल खेलमा आयोजक शुक्लागण्डकी नगरपालिका ‘ए’ ले बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरलाई २५–१६, २५–२३ को स्कोरको साथ सोझो सेटमा पराजित गर्न सफल भयो ।
तेस्रो क्वाटरफाईनलमा हरीनास गाउँपालिका स्याङजालाई २–१ को सेटमा पराजित गर्दै घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ सेमिफाईनल प्रवेश गरेको छ । घिरिङले २३–२५, २५–१४, २५–२३ को स्कोर प्राप्त गर्दै विजयी भएको हो ।
अन्तिम क्वाटरफाईनल खेलमा बाग्लुुङको गलकोट नगरपालिका विजयी भएको छ । गलकोटले भिमादलाई २–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १४ चैत्र २०७७, शनिबार १९:४० 169 Viewed